March 2018 - Page3of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးအဝလွန်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ကလေးဆို ဗိုက်ပူပါးဖောင်း ဝကစ်ကစ်လေးတွေဟာ အင်မတန်မှ ချစ်စရာပါ။ ဆွဲညှစ်ချင်စရာ၊ အာဘွားပေးချင်စရာ၊ ပါးဆွဲလိမ်ချင်စရာလေးတွေ ရယ်ပေါ့…. သို့ပေမယ့် သူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်ပိုနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ရေရှည်မှာ ကလေးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြသနာအနေနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ…
သင့်ကလေးမှာ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး သုံးနေတာ သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ သုံးနေခဲ့ရင် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ လူပျိုဖော်ဝင်စ လူငယ်တွေကြားမှာ… ဆေးလိပ် အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှူဟာ… အဓိက ပြသနာကြီး တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်…. ဆေးခြောက်နဲ့ အရက်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအသုံးအများဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး တွေဖြစ်ပါတယ်…. ဒီလို အဖြစ်တွေ…
ချောင်းဆိုးသွေးပါ အသက် 20 ဝန်းကျင်၊ ခပ်ပိန်ပိန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဆေးခန်းထဲဝင်လာသည်။ ယူနီဖောင်းလေးက ခပ်နွမ်းနွမ်းပေမယ့် အသားလေးဖြူနေတော့ ကြည့်လို့်တော့အဆင်ပြေသည်။ ကိုယ်တိုင်ကအလှကြိုက်သူမို့ ဒီကလေးမ ဒီထက်နည်းနည်းလေး ပိုပြည့်လာလျှင် ပိုကြည့်ကောင်းမှာပဲဟု ကောက်ချက်ချမိသည်။ ” ဆရာမ….သမီး ချောင်းဆိုးတာ သွေးတွေပါလို့..” ဒီအသက်အရွယ် ..ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့…ချောင်းဆိုးသွေးပါတယ်…
သတိ ၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ။ ( အပိုင်း_ ၂) အိမ်ထောင်ရှင်များနှင့် ချစ်ရည်လူးတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ဒ ီဆောင်းပါးဟာ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကရေးသားထားတာမို့ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် သို့လော သို့လောတွေ ရှင်းစေမယ်လို့ ယုံကြည်သလို ကျန်းမာရေးအမြင်နှင့်သာ ကြည့်ပေးပါရန် အရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသား၊…
ဆေးရုံတွေ သွားတိုင်း နောက်မှီလေးတွေနဲ့ လူနာတွေ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ နောက်မှီလေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေရတာပါလဲ? နောက်မှီ နဲ့ နေရတဲ့ လူနာအများစုဟာ လှဲအိပ်လို့ မရတဲ့ လူနာတွေပါ။ သူတို့ဟာ လှဲအိပ်ရင် မွန်းတတ်ကြပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် နှလုံးအမောဖောက်ပြီး အဆုတ်ကို ရေလွှမ်းတဲ့…
လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်းအကြောင်း အခုနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေ တော်တော်စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတစ်ခုကတော့ လက်မောင်းထဲမှာထည့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပေါ့။ ပရိုဂျက်စတင် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်း ပါဝင်ပြီး မီးခြစ်ဆံ အရွယ်အစားလောက် ရှိတဲ့ ပလစ်စတစ် အပျော့ချောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးက တစ်ခါထည့်ထားပြီးရင် ၅ နှစ်အထိ ကိုယ်ဝန်တားပေးနိုင်တယ်။…
မွေးရာပါ အမည်းရောင်အမှတ်အကြီးကြီးတွေ…. အချို့သောကလေးတွေမှာ မွေးရာပါအမှတ် အမည်းရောင်အကြီးကြီးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအမှတ်ပေါ်မှာ အမွေးအထူကြီးလည်း ဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲလိုအမွေးအမျှင်တွေဖုံးနေတဲ့ အမည်းရောင် အမှတ်အကြီးကြီးကို Giant Congenital Nevus လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအမှတ်ဟာ မွေးကာစမှာ သေးပေမယ့် ကလေးခန္ဓာကိုယ်ဖွံဖြိုးကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ အမှတ်ဟာလည်း ကြီးလာပါတယ်။ ဒီအမှတ်တွေဘယ်ကဖြစ်?…
ကလေးလိုချင်တဲ့စုံတွဲများဖတ်ဖို့ အချက်(၅)ချက် အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးလိုချင်တဲ့စုံတွဲများအနေနဲ့ သိချင်ကြတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဇနီးမောင်နှံတူတူနေမလဲ? အမျိုးသားဘက်က ဘာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ရှိမလဲ? ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အောက်ပါ အချက်ငါးချက်ကိုရေးသားလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမယ့်သူတစ်ဦးရှာပါ ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့…
ဂျိုင်းချွေးနံ့တော့ မနံစေလို။ နွေရာသီလည်းရောက်လာပြီမို့ချွေးလည်းပိုထွက်လာတတ်သလိုကိုယ်နံ့တွေလည်းပြင်းထန်လာတတ်ပါတယ်။ လူကြားထဲသွားနေချိန်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ဆို ရင်မိမိဂျိုင်းချွေးနံ့ကိုမေ့ထားနိုင်မှအဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ ဂျိုင်းချွေးနံ့ဘာကြောင့်နံရတာလဲ? တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအားနည်းတာကြောင်ွဖြစ်နိုင်သလို ချွေးအရမ်းထွက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ချွေးတွေဟာ ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားလေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဂျိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာကိုလိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒါတွေပျောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါ။ အဝတ်အစားရွေးချယ်ဝတ်ပါ အရောင်ဖျော့တဲ့ ချည်သားပါတဲ့အကျီၤပွပွလေးတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းလို့ ချွေးထွက်တာသက်သာစေမှာပါ။ အစားအစာရွေးချယ်စားသုံးပါ စားသင့်တာတွေက အသီးအနှံတွေ…